Ifektri yepumphead - China Pumphead Abakhiqizi, abahlinzeki
Imodeli: YZ35 Series Character ● Izinto zayo yi-PSU enokusebenza okuzinzile nokumelana nokushisa okuphezulu (150 ° C) ● I-asidi emelana, i-soda, kodwa hhayi i-solvent engokwemvelo ● Ngaphakathi izingxenye zensimbi zenziwe ngensimbi engagqwali engu-304. ukunciphisa ukugaya izigaxa, futhi kuthuthukise impilo ye-tubing Technical Parameters Model Ishubhu etholakalayo Isilinganiso sokugeleza okuphezulu （ml / min, Speed ​​range （rpm） Rollers material casing material Rollers NO. sikala ...
Ukudonswa okuphansi kwe-DMD15
Izinga lokugeleza kukaMax: 2070ml / min 1 Pulse low, presionion 2.Specialized in high-precision dispensing and small flow rate filling 3.PPS housing, can stand acid, alkali, and orangic solvent Double phase-compensation pressing block to reduce i-pulsation isebenza kahle futhi ngokunemba kuyathuthukiswa Ithebula lobuchwepheshe Model Roller material roller number izindlu impahla motor isivinini efanelekayo tubing max flow rate ml / min Iphutha eliphindiwe Isisindo (kg) DMD15-2A 304 Stainless st ...
Umthwalo wePompo Wokulayisha Ngokushesha KZ35
Izinga lokugeleza okuphezulu: 11000ml / min Kwenziwe ngensimbi engagqwali ukusetshenziswa kwemboni ngokuphelele Ukunikezela ngezinhlobo ezimbili zemodi yokuGcina iTubing: Clamper noma efanelekayo. Isingeniso sekhanda lepompo le-KZ35 lenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 ngokuphelele. Yenzelwe ngokukhethekile futhi ikhiqizelwa imboni eyenza imithi kanye nokudla ngokuya ngemigomo ye-GMP. Futhi inezici zokugeleza okukhulu, ukusebenza okuzinzile nokunokwethenjelwa, ukumelana nokugqwala, ngasikhathi sinye ngokuya ngezidingo zomsebenzisi, amakhanda wepompo angafakwa. Uhlamvu ● Yamukela ...
Umthwalo wePompo Wokulayisha Ngokushesha KZ25
Izinga lokugeleza okuphezulu: 6000ml / min Isingeniso Lapho ikhanda lepompo i-KZ25-1A lilungisa i-tubing efanayo ne-YZ25-1A, inganikeza isilinganiso sokugeleza okuphindwe kabili kune-YZ25-1A Nikeza izinhlobo ezimbili zemodi yokugcina ishubhu: I-Clamper noma ifaneleka. I-KZ25-1A isebenzisa ama-roller angama-304 angenasinakha ne-PC. Ngakho-ke ihlinzeka ngokusebenza okubonakalayo Ibhulokhi lokuminyanisa le-PPS line-Self-lubrication ukunciphisa ukugqoka kwamathambo. Ukuqina okuhle ngosayizi ozinzile. Ukuhambisana okuhle kwamakhemikhali nokuvikela ukumelana nokushisa. Uhlamvu ● Amakhadibhodi nesisekelo kunga ...
Izinga lokugeleza kukaMax: 248ml / min ku-150rpm Ifaka ukugeleza okuphansi okuphezulu, okunembile okushibhile kwekhanda lekhanda okusobala ukuze uhlole isimo sokusebenza esisebenza kahle futhi esihle, kungabekwa kupuleti kuphela noma kuphaneli ikakhulu elisetshenziselwa uhlelo lwe-OEM Izilinganiso Imodeli Ishubhu elifanele Ubukhulu bokuhamba ml / min Isivinini semoto rpm Roller impahla Izindlu impahla Roller izinombolo JY15-1A 13 #, 14 #, 19 #, 16 #, 25 #, 17 # 248 5050 POM PPS 2/4
isilinganiso sokugeleza okuphezulu: 2200ml / min Model: YZ15 / 25 series Classical design Lab Lab, stackable pump pump Character ● Materials its PSU which has performance stable and high temperature resistance (150 ° C) ● Resistant acid, soda, but not organic solvent ● Ngaphakathi izingxenye zensimbi zenziwe ngensimbi engagqwali engu-304 ● Izinsimbi ezisebenza ngama-roller zisetshenzisiwe ukunciphisa ukugaywa kwamatayipi, futhi zithuthukisa impilo ye-tubing Technical Parameters Model tubing iyatholakala I-Max flow rate （ml / min） ...
Amakhanda wempompo yochungechunge lwe-DG enzelwe amazinga wokugeleza okuncane, ukudluliswa kwamanzi oketshezi oluningi nokunikezela ngokunemba okuphezulu. Kulula ukushintsha nokulungisa ishubhu. Isondo le-trigger ne-ratchet lithuthukisiwe ukuze lisebenze kangcono. Abasebenzisi bangalungisa futhi bashintshe i-tubing kalula. Uhlamvu ● Ukuvaleka kungashintshwa kancane ngesondo le-ratchet ukulingana nezidingo ezahlukahlukene zosayizi wodonga lweshubhu. ● Ama-roller angu-6 apompa ikhanda anikezela ngokugeleza okuningi. ● Ama-rollers ayi-10 anciphisa izinga lokushaya nokugeleza kancane. ● Isakhono ...
Lo mkhiqizo njengamanje usetshenziswa kabanzi njengekhanda lempompo lakudala, ama-roller enziwa ngensimbi engagqwali noma i-PET-TX, ikesi lenziwa nge-PC. Ikhanda lonke lepompo licacile futhi libala. Kulula kumsebenzisi ukuthi abone ukusebenza kohlamvu lwepompo ● I-Crystal ecacile, ishayela okuphansi ● Ukusebenza okuzinzile futhi okungaguquguquki ● Usayizi ohlangene imingcele Model Availab ...